काठमाडौँ, २० पुस । काठमाडौँ बुढानिलकण्ठकी सुदिक्षा आचार्य ‘लेट मि इन मिसेज ब्युटी क्वीन नेपाल’ बन्न सफल भएकी छन् । महिलाहरुको क्षमता वृद्धिका लागि आयोजित प्रतियोगितामा काठमाडौँ बूढानीलकण्ठकी आचार्य पहिलो भएकी हुन् । सिजन मिडियाले बिहीबार आयोजना गरेको लेट मि इन मिसेज ब्युटी क्वीन नेपालमा सुदीक्षाले पहिलो स्थान हात पारेसँगै उनले टिभिएस स्कुटर, एक लाख ५० हजार बराबरको उपहार, लाभा मोबाइल…
हरेक वर्षझैँ यस पटक पनि बिहानैदेखि उद्यौली पूजा शुरु
उदयपुर, १७ मंसिर । प्रत्येक वर्ष जस्तैयस पटक पनि उदयपुरको सदरमु्काम गाईघाट लगायत विभिन्न स्थानमा बसोवास गर्दै आएका किराती राई समुदायले आइतबार बिहानैदेखि जिल्लाको त्रियुगा नगपालिका ११ स्थित बरुवा नदी किनारमा रहेको साकेला स्थानमा भेला भई उद्यौली पूजा मनाउने कार्य शुरु गरेका छन् । जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिकासहित अन्यत्र बसोवास गरेका किराती राईहरुले गाईघाटस्थित साकेला स्थानमा ठूलो संख्यामा भेला भएर आफ्ना किराती…
प्रियंका चोपरापछि हरियाणाकी मानुषी चिल्लरले जितिन विश्व सुन्दरीको ताज !
एजेन्सी, २ असोज । यस बर्षको विश्व सुन्दरीको उपाधि भारतकी मानुषी चिल्लरले हात पारेकी छन् । भारत हरियाणाकी २० बर्षीया मानुषी मेडिकलकी विद्यार्थी हुन्। १ सय १८ देशका विश्व सुन्दरीलाई पछि पार्दै उनले विश्व सुन्दरीको ताज पहिरिएकी हुन् । मानुसीले अन्तिम ५ मा इंग्ल्यान्ड, मेक्सिको, फ्रान्स र केन्याकी सुन्दरीलाई समेत पछि पारेकी थिइन् । विश्व सुन्दरीको ताज भारतले १७ वर्षपछि…
पञ्चायतमा नीता ढुंगानाको ‘छोरी कर्म’ (भिडियोसहित)
काठमाडौँ, २० असोज । नीता ढुंगानालाई मुख्य भूमिकामा राखेर फिल्म ‘पंचायत’को ‘छोरीको कर्म’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । फागूण १७ गतेबाट देशभर रिलिज हुने यो फिल्मलाई कता कता झलकमान गन्धर्वको गीतसँग तुलना गर्न सकिन्छ । हे बरै बोलको गीतसँग मेल खाने गीतमा सरु गौतमको आवाज छ । फिल्ममा नीता ढुंगानाको साथै सरोज खना, रुपा राना, गणेश गिरी लगायतको…
‘औधी विश्वास नगर्नु पराईमा, फरक पर्छ भनाई र गराईमा’
‘ह्याप्पी डेज’को ‘चेप्ट चेप्टे पेरुङ्गो’ गीतमा दया र दीयाको छमछमी
काठमाडौँ, १३ असोज । हालै युट्युबमा रिलिज भएको ह्याप्पी डेजको गीतमा दयाहाङ राई र दिया पुनको जोडी जमेको छ । गीतमा दुबैले कम्मर मर्काएर नाचेको गीत युट्युबमा राम्रै हेरिएको छ । अञ्जु पन्त र राजनराज शिवाकोटीको स्वर पनि गीतमा उत्तिकै जमेको छ । मिलन चाम्सले निर्माण गरेको यो फिल्मको पहिलो गीत सार्वजनिक भएको हो ।
बिग बोसको ११ औँ सस्करण शुरु, सलमान खान नै होस्ट
एजेन्सी, १२ असोज । भारतीय कलर्स टेलिभिजनबाट प्रसारण शुरु भएको छ । मुम्बईस्थित अन्धेरी बिग बोश शुरु भएको हो । कार्यक्रम यसपटक पनि सलमान खानले नै होस्ट गरेका थिए । उनले महंगो पारिश्रमिक लिएर शो सञ्चालन गरेका हुन । बिग बोशमा भारतीय धनाढ्यहरुको रोमान्स र छानीछानी मोडललाई लिएर रमाइलो गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुने गरेको छ । यसर्थ यो कार्यक्रम विवादित पनि…
फाटेको जुत्ताको ट्रेलर सार्वजनिक, प्रियंका र सौगातको कमेडी हावी
काठमाडौँ, १० असोज । सौगात मल्ल र प्रियंका कार्कीलाई कमेडी रोलमा फिट गराएर फाटेको जुत्तकोको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलरमा कमेडी हावी छ । फिल्मका मुख्य पात्र सौगात झन् कमेडी बनेका छन । फिल्ममा कामेश्वर चोरासिया पनि छन । अर्जुन कुमारले निर्माण गरेको फिल्म निकेश खड्काले निर्देशन गरेका हुन । कात्तिक १७ गते रिलिज हुने फिल्मको पहिलो गीतले भने राम्रै…
सौगात र बर्षाको गज्जबको केमेष्ट्री, भोलिबाट प्रदर्शन हुने फिल्म कस्तो छ ?
सौगात मल्ल र बर्षा राउतको गज्जबको केमेष्ट्री मिलेको फिल्म मेरो पैसा खोई भोलि असोज ११ गतेबाट हलमा जादैछ । फिल्मको ट्रेलरमा बुद्धि तामाङ, छुल्ठिम गुरुङदेखि बर्षा र सौगातको भूमिका गज्जबको देखिएपनि छक्का पञ्जा २ सँग भिड्न लागेको फिल्म कस्तो छ ? भोलि नै थाहा हुनेछ । दीपक राज गिरी र दीपा श्री निरौलाले बनाएको छक्का पञ्जा २ पनि भोलि नै…
‘छक्का पञ्जा २’ को ट्रेलर सार्वजनिक, रिलिज असोज ११ गते
काठमाडौँ, २२ भदौँ । दीपक दीपाको छक्का पञ्जा २ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । बुधबार सार्वजनिक ट्रेलर छक्का पञ्जा जस्तो हसाइलो भने छैन । यसका शुरुदेखिका गीतहरु विवादित बनेपछि केही निराश बनेको दीपक दिपाको टिमले ट्रेलरबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाउने सम्भावना कम छ । बुद्धि तामाङ, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, सुरेन्द्र पौडेलका साथै दीपकराज गिरी, बर्षा राउत, प्रियंका कार्की, स्वष्तिमा…
चितवन, १९ भदौ । शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको प्रेमकथामा आधारित चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’ ले प्रदर्शनको शुरुवातीमा दर्शकको भीड लागेको छ । देशभर ९० भन्दा बढी हलमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्रका अधिकांश हल करिब करिब भरिएका छन् । आइतबार पनि दर्शकको राम्रो साथ पाएको चितवनको इन्द्रदेव चलचित्र हल नारायणगढका सञ्चालक मुक्ति पियाले बताए । ‘म यस्तो गीत गाउँछु,’, ‘प्रेम गीत २’ जस्ता…
दिपिकालाई हट मोडल बनाउँदै रमेशले ‘ऐश्वर्य’को टिजर सार्वजनिक गरे
काठमाडौँ, १४ भदौँ । तिहारको छेकोलाई आधार मान्दै फिल्म ‘ऐश्वर्य’ को टिजर सार्वजनिक भएको छ । कात्तिक ९ गते प्रदर्शन हुने फिल्मको टिजरमा नव नायिका दिपिका प्रसाई हट मोडलका रुपमा प्रस्तुत भएकी छन । नायक एवं निर्माता रमेश उप्रेतीकी प्रिय बनेकी दीपिकाका लागि खलनायकको भूमिकामा देखिएका प्रशान्त ताम्रकारले लडाई गर्ने दृश्य पनि टिजरमा समावेश छ । दिवाकर भट्टराईले निर्देशित गरेको फिल्म…
‘घर त ठिमी ’ बोलको लामिछानेको लोकदोहोरी गित सार्वजनिक
काठमाडौं,१३ भदौ । सर्जक तथा संञ्चारकर्मि सरोज लामिछानेको लय शब्द गायीका स्मृति गौतमको घर त ठिमी नेपाली लोक दोहोरी गित सार्वजनिक भएको छ । पानी छैन हे माया म बस्ने ठाउँमा कोठा खोज्देऊ तिम्रै घर छेउछाउमा भन्दै वास्तविक घटनाको परिकल्पना गर्दै संञ्चारकर्मि लामिछाने घर त ठिमी बोलको लोक दोहोरी गित सार्वजनिक गरिएको बताए । राजधानी काठमाडौको समस्यालाई कल्पना गर्दै विन्ध्यावासिनी…
‘छक्का पञ्जा २’को नयाँ गीत : प्रियंका र दीपकको झ्याम्म झ्याम्म
दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाको प्रतिक्षित फिल्म ‘छक्का पञ्जा २’ को नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा हरिवश आचार्य र आस्था राउतको स्वर रहेको झ्याम्म झ्याम्म बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो । गीतको भिडियोमा दिपकराज गिरी, प्रियंका कार्की, विल्सन विक्रम राई र बुद्धि तामाङको अभिनय छ । दिपाश्री निरौलाले निर्देशन गरेको फिल्म असोज ११ गतेदेखि हलमा आउनेछ । फिल्ममा पुरानै…
‘जोनी जेन्टलमेन’को मन छुने गीत, पल र आँचलको हेरु हेरु लाग्ने भिडियो
प्रेमी जोडी पल शाह र आचँल शर्मा स्टारर जोनी जेन्टेलमेनको मन छुने गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । पल र आचँलको हेरु हेरु लाग्ने भिडियो पछिल्लो २४ घण्टायता १ लाख बढीले हेरिसकेका छन । अर्जुन पोखरेलको संगीतमा अञ्जु पन्त र सुरेश लामाको स्वर छ । पल र आचँल शर्माको सयँुक्त जोडीको दोश्रो सफल हुन सक्ने यो फिल्म भाद्र ३० गतेबाट प्रदर्शनमा…